महामारीमा चुनावको झल्को, नेकपा र कांग्रेसबीच पार्टी प्रवेश गराउने होडबाजी ! – सजल सन्देश
महामारीमा चुनावको झल्को, नेकपा र कांग्रेसबीच पार्टी प्रवेश गराउने होडबाजी !
By Sajal sandesh	 On१२ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०५:४७
बझाङ – निषेधाज्ञा र लकडाउनका बेला बझाङमा राजनीतिक दलहरू चुनावी झल्को दिने गरी पार्टी प्रवेश गराउने अभियानमा तँछाडमछाड गर्दै लागेका छन् । दुई ठूला दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसका अभियानले कोरोना रोकथामका सबै कामलाई भर्सेलामा पारेको त छ नै, उल्टै संक्रमणको जोखिम पनि बढाइदिएको छ ।
संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले भेला नहुन सचेत गराइरहेका बेला दुवै पार्टीबीच जिल्लाभर आमसभा र भेला गर्दै एकअर्को पार्टीका कार्यकर्तालाई भित्र्याउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । पार्टी प्रवेश गरेकाहरूलाई बधाई दिएका तस्बिर र स्टाटसले सामाजिक सञ्जालहरू रंगिएका छन् ।
बझाङ प्रशासनले भदौ ३ मा जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै कुनै पनि प्रकारका सभा, सम्मेलन, भेलालगायत भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न सूचना जारी गर्‍यो । त्यही दिन प्रशासन कार्यालयभन्दा करिब ६ सय मिटरको दूरीमा रहेको नेकपा पार्टी कार्यालयमा चार सय जनाभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ताको उपस्थितिमा भेला गरियो । जहाँ नेकपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, पूर्वमन्त्री, सांसद, केन्द्रीय नेता तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा डेढ सयभन्दा बढीलाई पार्टी प्रवेश गराइएको बताइयो ।
त्यसै दिन प्रशासन कार्यालयबाट डेढ किलोमिटरको दूरीमा रहेको जयपृथ्वी नगरपालिका–७ मा कांग्रेसले पनि उत्तिकै संख्यामा नेता–कार्यकर्ताको भेला डाकी १ सय २० जना नेकपाका कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराएको दाबी गर्‍यो । यो भेलामा पनि कांग्रेसका जिल्ला र केन्द्रीयस्तरका नेता सहभागी थिए । याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।